Thunder VPN အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2021 - အခမဲ့ - 9Apps
ဒေါင်းလုပ် APK（8.6MB） ယခင်ဗားရှင်း
၏ဖော်ပြချက် Thunder VPN - Fast, Safe VPN
Thunder VPN သည်လျှပ်စီးမြန်သော app တစ်ခုဖြစ်ပြီးအခမဲ့ VPN ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်သည်။ မည်သည့် configuration မလိုအပ်ပါ။ ခလုတ်တစ်ခုသာနှိပ်ပါ။ အင်တာနက်ကိုလုံခြုံစွာနှင့်အမည်ဝှက်ထားနိုင်သည်။
Thunder VPN သည်သင်၏အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုကို encrypt လုပ်ထားသဖြင့်တတိယပါတီများသည်သင်၏အင်တာနက်လှုပ်ရှားမှုများကိုပိုမိုလုံခြုံအောင်မလုပ်နိုင်စေရန်, ပုံမှန် proxy, သင်၏အင်တာနက်၏လုံခြုံမှုနှင့်လုံခြုံရေးကိုအထူးသဖြင့်အများပြည်သူသုံးအခမဲ့ Wi-Fi ကိုအသုံးပြုသောအခါ။ ဆာဗာအများစုသည်အခမဲ့အသုံးပြုကြသည်, သင်လိုချင်သောအလံကို နှိပ်. server ကိုသင်လိုချင်သလိုမျိုးပြောင်းလဲနိုင်သည်။
vpn (Android 5G5 လိုအပ်သည်) ကိုအသုံးပြုသောအက်ပ်များကိုရွေးချယ်ပါ။ > ✅ Smart SPARS SERVERS ဆာဗာ
►ဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားသည့် UI, adds ads ad
Usage နှင့်အချိန်ကန့်သတ်ချက်မရှိပါ။ ✅နှင့်အတူအလွန်သေးငယ်သောခွင့်ပြုချက်မလိုအပ်ပါ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်
အသုံးပြုသူသီးသန့်တည်ရှိမှုသည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အလွန်အရေးကြီးသည်။ သင်သည်အခြားအလားတူ app များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏ app သည်အနည်းဆုံးခွင့်ပြုချက်ရရှိလျှင်, အသေးငယ်ဆုံးအထုပ်အရွယ်အစားမှာအသေးငယ်ဆုံးအထုပ်အရွယ်အစားကိုရရှိသည်။ ဆိုလိုသည်မှာအထိခိုက်မခံသောအချက်အလက်များနည်းပါးသည်။ ဤအက်ပလီကေးရှင်းသည် privacy အတွက်အလွန်ကောင်းသောရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
ကမ္ဘာပေါ်ရှိအလျင်မြန်ဆုံး virtual private network ကိုနှစ်သက်သည်။
မိုးကြိုး VPN ဆက်သွယ်မှုမအောင်မြင်ပါက, ဤအဆင့်များကိုသင်လိုက်နာနိုင်သည်။
1) အလံပုံသင်္ကေတကိုနှိပ်ပါ။ 2) Servers များကိုစစ်ဆေးရန် Refresh ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
၎င်းကိုကြီးထွားလာစေရန်နှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်ကောင်းမွန်သောအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကိုမျှော်လင့်သည် .-) VPN
VPN နှင့်ဆက်စပ်သောနိဒါန်း သုံးစွဲသူများအား၎င်းတို့၏ကွန်ပျူတာကိရိယာများကိုပုဂ္ဂလိကကွန်ယက်နှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်နွှယ်နေသလိုမျှဝေထားသောသို့မဟုတ်အများပြည်သူသုံးကွန်ယက်များတွင်အချက်အလက်များကိုဖြန့်ဝေခြင်းနှင့်လက်ခံခြင်းကိုလက်ခံနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် VPN ကို ဖြတ်. အသုံးပြုသောလျှောက်လွှာများသည်ပုဂ္ဂလိကကွန်ယက်၏လုပ်ဆောင်နိုင်မှု, လုံခြုံရေးနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုတို့မှအကျိုးကျေးဇူးများရနိုင်သည်။
တစ် ဦး ချင်းအင်တာနက်သုံးစွဲသူများသည်၎င်းတို့၏အရောင်းအဝယ်ကို VPN ဖြင့်လုံခြုံစိတ်ချမှု, ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအထောက်အထားနှင့်တည်နေရာကိုကာကွယ်ရန်ရည်ရွယ်ချက်အတွက် proxy server များ။ သို့သော်အချို့သောအင်တာနက်0က်ဘ်ဆိုက်များသည်၎င်းတို့၏ပထဝီနိုင်ငံမှကန့်သတ်ချက်ကိုရှောင်ရှားခြင်းမှတားဆီးရန် VPN နည်းပညာကိုပိတ်ပင်ထားသည်။
VPN များသည်အွန်လိုင်းဆက်သွယ်မှုကိုလုံးဝအမည်မသိနိုင်အောင်မလုပ်နိုင်ပါ, သို့သော်များသောအားဖြင့် privacy နှင့်လုံခြုံရေးတိုးမြှင့်နိုင်သည်။ ပုဂ္ဂလိကသတင်းအချက်အလက်များကိုထုတ်ဖော်ခြင်းကိုကာကွယ်ရန် VPNs သည် tunneling protocols နှင့် encrytition teaches များကို အသုံးပြု. စစ်မှန်သောအဝေးမှအဝေးမှ0င်ရောက်နိုင်သည်။
မိုဘိုင်း virtual virtual private networks များကို VPN တစ်ခု၏ addination တစ်ခုတည်းသို့မသတ်မှတ်ထားသည့်နေရာများတွင်အသုံးပြုသည်။ ဒါပေမယ့်အစားဆယ်လူလာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်ဒေတာကွန်ရက်များသို့မဟုတ် Wi-Fi Access Points မှဒေတာကွန်ရက်များကဲ့သို့သောကွန်ရက်များအနှံ့အပြားတွင်လှည့်လည်ကြည့်ရှုသည်။ မိုဘိုင်း VPNs များသည်အများပြည်သူလုံခြုံမှုတွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်လူထု၏လုံခြုံမှုတွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုသောကြောင့်ကွန်ပျူတာကိုကွန်ပျူတာနှင့်ပြစ်မှုဆိုင်ရာ datchase ကဲ့သို့သောကွဲပြားခြားနားသောကွန်ရက်စာမျက်နှာများအကြားခရီးသွားလာကြစဉ်။
ဘာအသစ်လဲ Thunder VPN - Fast, Safe VPN 4.0.17